Translation / mubhadharo / mari - The Tailoress
Kuripa menyu mari
Unogona kusarudza kwako nzvimbo mubayiro mari kuburikidza kusarudza kubva Muterere zvakarurama-ruoko kurutivi kamwechete. Izvi vachangoerekana kuchinja mitengo zvose pamusoro Website kune zvakarurama kutendeuka mutengo nyika yako.
Paypal ndiyo nzira yokutenga chero chigadzirwa kubva The Tailoress uye ndiye ndakachengeteka nzira yokuita mari paIndaneti. Zvinosuruvarisa Paypal haritsigiri mari zvose uye kuti kurege imi ironge hurongwa yako kana kusarudza imwe mari hazvishandi kutsigira. Zviri nyore kugadzirisa izvi, kungoti exchange kuti mari kuti Paypal anoita kutsigira uye ipapo unogona kupedza hurongwa hwako.
Below ari mazita mari Paypal parizvino inotsigira:
Real Brazilian (chete nhengo Brazilian)
Malaysian Ringgits (chete Malaysian nhengo)
EDZA nokuti Turkish Liras (chete Turkish nhengo)
Change mari yako pazasi: